I-Wholesale i-Multicolor 13.3 intshi ye-Element ye-Shell Label ye-ESL kunye nomthengisi | Zkong
-Igama: I-Multicolor 13.3 intshi yelebheli yeshelf ye-elektroniki ESL
Ubukhulu: 13.3 ″
-Bunye ubungakanani: 1.54 ″, 2.13 ″, 2.6 ″, 2.7 ″, 2.9 ″, 4.2 ″, 7.5 ″ 11.6 ″
-Display: mhlophe, mnyama, bomvu, tyheli, Luhlaza, Luhlaza, mfusa njl
Ilebheli yeShelfu yeLifu yeMulticolor
Uxinzelelo kwintengiso luhlala lusanda. Ngenxa yesidingo sokudibanisa i-e-commerce kunye namaxabiso okuthengisa, ubuchwephesha obutsha buyalandelwa. Izibonelelo zolawulo lwamaxabiso olunamandla kunye nolubanzi ngelixa unciphisa umthwalo womsebenzi zicacile. Ungawahlengahlengisa ngokulula amaxabiso ngokungqinelana nabantu okhuphisana nabo okanye ukhulise indlela yokuziphatha ethile yokuthenga.
Amaxabiso asezulwini ayisiyonto yexesha elizayo kodwa yinyani. Abathengi bafumana amaxabiso awahlukeneyo kwizibonelelo ezifanayo ezifanayo ngeendlela ezahlukeneyo. Oku kufuna izixhobo zokulawula kunye nokuhlengahlengisa uninzi lwala majelo. Ukongeza, inkqubo yethu ibonelela ngokwenyani, ukugcina ixesha kunye nokwenza ubutyebi. Uhlengahlengiso lwamaxabiso ezandla kunye nexesha kunye nokutya kwezixhobo nokuba ngaba lishishini elikhulu, umthengisi weemoto, ivenkile enkulu, ivenkile yefashoni okanye ishishini elincinci. Zinike amandla okwaba kwakhona ezo zibonelelo. Uhlengahlengiso lwamaxabiso edijithali kwindawo ebanzi kunye neelebheli ezishelfini zombane ngoku ngumcimbi wemizuzu kuneeyure.
I-e-commerce iqhubela phambili inyusa uxinzelelo kukhuphiswano kubathengisi kwaye ikhokelela kulungelelwaniso lwamaxabiso rhoqo. Ukubonisa ixabiso esele liphelelwe lixesha kukhokelela ekuphulukaneni kwangoko nokuthembela kubathengi, ekungekho mnini shishini unokukufikelela kuqoqosho lwanamhlanje. Ithegi yamaxabiso e-elektroniki inika ithuba lokujongana nezi mfuno ngokuguquguquka, imveliso kunye nokuchaneka. Ukutshintsha ithegi yamaphepha emveli kuthatha malunga nemizuzu emi-3, ethi kongeze ngokukhawuleza ukuya kwiiyure ezininzi zomsebenzi kwivenkile yonke. Ngaphandle kokuphunyezwa kwexabiso elincinci, ukunyuka kweendleko kunye neempazamo eziphezulu, iithegi zamaxabiso ephepha zinokubangela inkunkuma ebalulekileyo. Ngenxa yempendulo emfutshane, iilebheli zexesha zinokuhlaziywa ngexesha leeyure zomsebenzi ngaphandle kokubeka emngciphekweni ukungahanjiswa ngokungafanelekanga kweshelufu kunye nexabiso lerejista yemali enciphisa izikhalazo.
Masisebenzise i-tag yexabiso ledijithali ukusombulula yonke imiba iithegi zamaphepha emveli anazo.
Egqithileyo I-Multicolor 5.8 intshi yeLebhu yeShelf Label ESL